१४ वर्षदेखि कोमामा रहेकि महिलाले स्वस्थ बच्चा जन्म दिएपछि डाक्टरहरु नै चकित् – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > १४ वर्षदेखि कोमामा रहेकि महिलाले स्वस्थ बच्चा जन्म दिएपछि डाक्टरहरु नै चकित्
१४ वर्षदेखि कोमामा रहेकि महिलाले स्वस्थ बच्चा जन्म दिएपछि डाक्टरहरु नै चकित्
admin January 6, 2019 अन्तराष्ट्रिय	0
एरिजोना। अमेरिकाको एरिजोनास्थित हेसिंडा हेल्थ केयरमा करिब १४ वर्षदेखि कोमामा रहेकी एक महिलाले स्वस्थ बच्चालाई जन्म दिएकी छिन् । कोमामा पूर्णतया चेतनाशून्य महिलाले बच्चा जन्माएपछि उनीमाथि अस्पतालमै यौनशोषण भएको आशंकामा जाँच सुरु गरिएको छ । यही अस्पतालका स्टाफमाथि यसअघि पनि दुव्यवहारको आरोप लागिसकेको छ ।
बच्चा जन्माउने महिला विगत १४ वर्षदेखि अस्पतालमा छिन् । पानीमा डुबेपछि उनको मस्तिस्क क्षतिग्रस्त भएको थियो र उनी कोमामा पुगेकी थिइन् । उनलाई २४ घण्टा हेरचाह गर्नुपर्छ । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी दिनमै कैयौं पटक महिलाको जाँच गर्छन् । अब स्टाफमाथि यौनशोषणको आरोप लागेपछि अस्पतालले नियम फेरेको छ । नयाँ नियमअनुसार अब पुरुष स्टाफसँगै महिला स्टाफ पनि त्यहाँ रहनेछिन् । स्टाफको संख्या बढाउनुका साथै बिरामीको सुरक्षामा पनि ध्यान दिइनेछ ।
केन्द्रका प्रवक्ताका अनुसार यो घटनाको जाँचमा स्टाफले हरसम्भव सहयोग गरिरहेका छन् । हेल्थ सेन्टरका स्टाफमाथि यसअघि पनि अभद्रताको आरोप लागिसकेको थियो जसका कारण २०१३ को डिसेम्बरदेखि यो अस्पताललाई दिइने अनुदानमा रोक लगाइएको थियो ।
फेरि चर्चामा आईन् पुलवाली पार्वती! यस्तो छ चर्चामा आउनुको कारण हेर्नुस्
आमासँगै स्कुटरमा सवार ७ वर्षीय छोराले गर्दै थिए यस्तो काम, भिडियो भाइरल
संसारकै दोश्रो धनि बिल गेट्स, यसरी उभिन्छन् कोक किन्ने लाइनमा!
फेरि साउदीबाट आयाे सबैकाे मन रूवाउने खबर, एक नेपालीको यस्तो दुःखद निधन्
धनुषाबाट आयो यस्तो दुःखद खबर, कुन पापीले यी बृद्धकाे गरे यस्तो बेहाल?
कस्तो अचम्म ! श्रीमान-श्रीमति नै मृ’त फेला, बिचरा कलिली छोरीको यस्तो बिजोग! (भिडियो हेर्नुस्)
भर्खरै मन्त्रीको सपथ खाएका राजीव गुरुङलाई का र वाही गर्न किन उठ्यो मा ग ?
मध्यरातमा पाँच तारे होटलमा जन्मदिन मनाउँदै थिइन् नायिका शाह, ड्र ग्स सहित प्रेमीसंग प क्रा उ परिन्